'' လန်ဒန်လူနာ '' HIV ပိုးလွှတ်ပိုမိုနီးစပ်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းဖို့ခြေလှမ်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ • ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေး • လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေး '' လန်ဒန်လူနာ '' HIV ပိုးလွှတ်ပိုမိုနီးစပ်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းဖို့ခြေလှမ်း
'' လန်ဒန်လူနာ '' HIV ပိုးလွှတ်တစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းဖို့နီးကပ်လာတဲ့ခြေလှမ်း
Teddy Oben5မတ်လ 2019
တစ်ဦးကစက္ကန့်လူတစ်ဦးတွင် HIV-1 ပြီးနောက်-ကုသမှုခြား, AIDS ရောဂါများဖြစ်ခြင်းနှင့်ဖှယျကုသဖြစ်ပါတယ်ဒါကဗိုင်းရပ်စ်ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်လွှတ်အတွက်သုတေသီများဆေးပညာကွန်ဖရအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာဖို့သတ်မှတ်ထားကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဆယ်ပါးနှစ်သေစေနိုင်သောရောဂါအဖြူဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဖြစ်ခြင်းတစ်ခုဟာ HIV-ရောဂါရှိသူရဲ့ပထမဦးဆုံးအတည်ပြုခဲ့သည်ကိစ္စတွင်ပြီးနောက်မှသာ "လန်ဒန်လူနာ" အဖြစ်လူသိများသည်လူကိုလကြာဗိုင်းရပ်စ်မရှိနိမိတ်လက္ခဏာနီးပါး 19 ပြသထားပါတယ်, သူတို့ကဂျာနယ်သဘာဝတရားထဲမှာနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးလူနာကိုကိုင်လျက်ကနေ HIV ပိုးကာကွယ်မယ့်အဆန်းမျိုးဗီဇ mutation နှင့်အတူအလှူရှင်များအနေဖြင့်ပင်စည်ဆဲလ်များကိုလက်ခံရရှိ, သွေးကင်ဆာကုသရန်ခဲ့ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
"အလားတူချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးပြီးတစ်စက္ကန့်လူနာအတွက်လွှတ်ရရှိရန်အတွက်အားဖွငျ့ကြှနျုပျတို့-ရှိသည်ဟု Que la ဘာလင်လူနာတစ်ဦး Anomaly မဟုတ်ခဲ့ပြ," ခဲရေးသားသူ Ravindra Gupta, ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကပါမောက္ခတစ်ဦးကိုပထမဦးဆုံးသိအလုပ်လုပ်တဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းဖို့ရည်ညွှန်းပြောပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် HIV ကူးစက်လူသန်းပေါင်းများစွာဒါခေါ် antiretroviral ကုထုံး (အေအာရ်တီ) နဲ့စစ်ဆေးမှုများအတွက်ရောဂါစောင့်ရှောက်ကုသမှုရည်မှန်းချက်ဗိုင်းရပ်စ်၏လူနာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့မထားဘူး။
"ဆေး qui လူတွေကိုသူတို့ရဲ့လုံးဘဝပုံစံအဘို့ကိုယူဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုဗိုင်းရပ်စ်ဖိနှိပ်နှင့်အတူယခုအချိန်တွင်မှာ HIV ပိုးဆက်ဆံဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်" ဟု Gupta ပြောပါတယ်။
"ဒီဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်အထူးစိန်ခေါ်မှု," သန်းပေါင်းများစွာသောနေဆဲလုံလောက်တဲ့ကုသမှုပေးပို့လက်ခံရရှိကြသည်မဟုတ်ရှိရာ, သူကဆက်ပြောသည်။
အနီးကပ်လူတွေဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် HIV နှင့်အတူနေထိုင်နေကြသန်း 37 သာ 59 ရာခိုင်နှုန်းကိုရည်ရွယ်ဖို့အေအာရ်ဗွီဆေးဝါးများပေးပို့လက်ခံရရှိထားပါသည်။ နီးပါးတဦးတည်းလူဦးရေသန်းသည် HIV-related အကြောင်းတရားများကနေနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသေဆုံးလျက်ရှိသည်။
HIV ပိုး၏အသစ်ဆေးယဉ်ပုံစံကြီးထွားလာစိုးရိမ်ပူပန်မှု est သိရသည်။
အန္တရာယ်များတဲ့နဲ့နာကျင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း - - HIV ပိုးကုသမှုများအတွက်အလားအလာ option ကိုမဟုတ်ပါဘူး Gupta နဲ့သူ့အဖွဲ့ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသဒါကအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
- '' တစ်ဦးကရောဂါပျောက်ကင်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ် '-
"ဒုတိယ box ကိုတစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကစိတ်ကူးခိုင်မာစေ," ရှာရု R ကို Lewin, ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့ Immunization များအတွက်ပတေရုသဒိုဟာဆီအင်စတီကျုနှင့်မဲလ်ဘုန်းတက္ကသိုလ်ဒါရိုက်တာကအေအက်ဖ်ပီသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့က-ကြလိမ့်မယ်ဒီမှာခြားနားချက်ကို လုပ်. , ဤသူသည်သူ၏ဗိုင်းရပ်စ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုရပ်တန့်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သည့်အစားထိုးကုသမှု၏ qui ရှယ်ယာထုတ်မာရ်နတ်ရန်ကြိုးစားနိုင်ပါသည်။ "
နှစ်ဦးစလုံးဟာလန်ဒန်နဲ့ဘာလင်လူနာ CCR5 အဖြစ်လူသိများသူတစ်ဦးကို HIV အဲဒီ receptor ၏ဖော်ပြမှုကာကွယ်အလှူရှင်များတင်ဆောင်နေတဲ့မျိုးဗီဇ mutation ထံမှပင်စည်ဆဲလ်အစားထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
"ဗိုင်းရပ်စ်ရှင်းလင်းတဲ့လမ်းရှာဖွေခြင်းတစ်ခုလုံးကိုဖိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးစားပေးဖြစ်ပြီး, ရည်မှန်းချက် ICT အိမ်ရှင်၏သွေးဖြူဆဲလ်သို့အဆိုပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုး Integrated သောကြောင့်အထူးသဖြင့်အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်" ဟု Gupta ကရှင်းပြသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု 2003 အတွက် HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုတွေနဲ့သိလိုက်ရတယ်နှင့် 2012 ကတည်းကတဦးတည်း antiretroviral ကုထုံး-ခဲ့သူကားအဘယ်သူဗြိတိန်တွင်အမည်မသိအထီးလူနာဖော်ပြထားသည်။
နောက်ပိုင်းအဲဒီတစ်နှစ်တာ, သူအဆင့်မြင့် Hodgkin ရဲ့ Lymphoma, တစ်ဦးသေစေနိုင်သောကင်ဆာရောဂါရှိတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သူဟာဗီဇမူကွဲ CCR2016 နှစ်ခုမိတ္တူ, အကမ္ဘာတွင်လူဦးရေရဲ့အကြောင်းကိုတစ်ရာခိုင်နှုန်းတို့ကသယ်ဆောင်ပေါင်းစပ်နှင့်အတူ5အတွက်အလှူရှင်များထံမှတစ်ဦးလို့ခေါ် haematopoietic ပင်မဆဲလ်အစားထိုးကုသမှုခံယူ။
CCR5 အများဆုံး HIV ပိုး-receptor 1 အသုံးပြုသောဖြစ်ပါတယ်။
CCR5 နှစ်ခု mutation မိတ္တူများအဘယ်သူသည်-ပြည်သူ့ HIV ပိုး-ဆုံး 1 ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်, ဗိုင်းရပ်စ် frustrating '' အိမ်ရှင်ဆဲလ်တွေရိုက်ထည့်ရန်ကြိုးစားသည်။
ကဝေဖန်နေကြသည်ဒါကဆဲလ်တွေသေဆုံးအဖြစ်ကင်ဆာနှင့်ဝသကဲ့သို့, ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှု HIV ပိုးဆန့်ကျင်ထိရောက်သောနိုင်ပါတယ်။
avez la CCR5 အဲဒီ receptor ကိုမကျင့်သောသူတို့နှင့်အတူခုခံအားဆဲလ်အစားထိုးရည်ရွယ်ချက်ကုသမှုပြီးနောက်မိတ်ဖက် rebounding ကနေ HIV ပိုးကာကွယ်ခြင်းအတွက်သော့ချက်ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသပြီးနောက်လူနာလန်ဒန် qui အေအာရ်ဗွီကုသမှုရပ်တန့်ခဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးမှာ 16 လကြာတဦးတည်းအေအာရ်ဗွီဆေးဝါးများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ပုံမှန်စမ်းသပ်ခြင်း Que la ဗိုင်းရပ်စ်ဝန်လူနာရဲ့သိရှိနိုင် ထိုအချိန်မှစ. ကျန်ရစ်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှလူနာရုံတစျခုအစားထိုးခြင်းနှင့်လျော့နည်းအထူးကြပ်မတ်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှုကိုလက်ခံရရှိစဉ်တိမောသေဘရောင်းသည် "ဘာလင်လူနာ" နှစ်ခုအစားထိုးပေးခြင်းနှင့်သွေးကင်ဆာကုသရန်စုစုပေါင်းခန္ဓာကိုယ် irradiation ခံယူခဲ့။
"ငါသည် HIV ပိုး၏ပျောက်ကင်းအောင်ကုသကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုတည်းသောလူတစ်ဦးဖြစ်ချင်ကြဘူး," ဘရောင်းသူကသူ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာထုတ်ဖေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဘယ်ကြောင့်ရှင်းပြ, 2015 အတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်ထဲမှာရေးခဲ့တယ်။
"ငါသည် HIV ပိုးများအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းသို့မဟုတ်ကုသမှုအတွက်ရှာဖွေသုတေသနပြုပံ့ပိုးဖို့ငါ့အသက်ကိုရည်စူးချင်တယ်။ "
လန်ဒန်လူနာများအတွက်သုတေသနအဖွဲ့သည် Retroviruses နှင့် Seattle, ဝါရှင်တန်ရှိအခွင့်အရေးသမားများရောဂါပိုးမကူးစက် (CROI) ရက်တွင်နှစ်စဉ်ညီလာခံမှာသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
အရက်ဆေးရွက်ကြီး: တဦးတည်းအနိုင်ရ 10 နည်းလမ်းများ